L-carnitine ho an'ny fatiantoka
Mendrika Fitness club
Vehivavy, nirotsaka an-tsehatra amin'ny hatsaran-tarehy, dia mety naheno momba ilay l-carnitine matavy. Ho an'ny vehivavy hafa mieritreritra ny handresy ny lanjany, dia tsara ny milaza fa ny l-carnitine dia votoaty novokarin'ny aty, izay tompon'andraikitra amin'ny fikabolan'ny lipida. Fa nahoana izy ireo no nanoro hevitra ny hitondra l-carnitine noho ny fahaverezan'ny lanja sy ny fomba hanaovana izany marina? Andao hiezaka hiatrika ireo olana ireo.
Mila l-carnitine ve aho amin'ny fahavoazana mavesatra?
Ankizivavy maro no te-hino ny dokam-barotra, ary milaza izy fa ho azy ireo, ny l-carnitine dia ho lasa andriamanitra fa ity fitaovana mahagaga ity dia ho mora ny manala ireo santimetatra sy kilao. Saingy tena ilaina ve ny carnitine ho an'ireo vehivavy maniry ny handany lanja? Angamba tsy tokony horaisina izy, satria samy mahafantatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny dokam-barotra ny vokatra sy ny zava-misy?
Ny carnitine dia novokarin'ny vatantsika, ary misy isa maromaro manatrika na dia eo aza ireo izay mihinana. Noho izany, ny fandraisana fanampiny ity fananana ity dia tsy fepetra toy izany. Ny fahazoana mandray ny l-carnitine dia mety ho an'ny ankizivavy mifikitra amin'ny sakafo ara-tsakafo henjana ihany - ao anatin'ny fihenan-dry zareo dia tsy misy mason-tsoa ho an'ny famokarana carnitine.
Moa ve ny carnitine manampy amin'ny fahazoana mavesatra?
Ny fanadihadiana dia naneho fa ny mpampiasa carnitine dia very lanjany haingana kokoa noho ireo izay tsy nahazo ny sakafo fanampiny amin'ny votoatiny. Saingy tsy mitranga izany raha tsy miaraka amin'ny sakafo sy fampiharana ny fitambaran'ny karnitine. Ny votoatiny dia tsy miteraka fisainana mistery amin'ny fahaverezan'ny vatana. Noho izany, mipetraka eo am-pandriana ary mihinana carnitine, tsy afaka miala amin'ny lanja ianao. Ary ny ankizivavy izay mitondra carnitine noho ny fahaverezan'ny lanja, dia tsy maintsy ampidirina ao amin'ny fandaharam-pianarany, fampiharana aerôbika, raha tsy izany ny vokatra dia ho kely kokoa.
Noho izany ny habetsaky ny volanao dia tsy hisy fiantraikany amin'ny habetsahanao mandray ny pilina, fa ny habetsahan'ny vola azonao amin'ny fiofanana. Avy eo dia manontany ny fanontaniana, fa maninona no ilainao ity l-carnitine ity, ilay antsoina hoe fat burner? Ny zava-misy dia mitombo ny fiaretana ity fiasa ity, izany no mahatonga ny fampiofanana mahomby kokoa, ary mihabe ny metabolisma, midika izany fa haingana ny fatiantoka. Ny marina dia iray "fa" - hipoitra ihany koa ny fiankinan-doha, ny vatana dia hanomboka hitaky ny fiverenan'ireo kaloria izay omenao ao amin'ny gym. Izany no mahatonga ny firafitry ny fanampiana afa-tsy carnitine anisan'izany ny fibra na ny hoodia - manampy azy ireo hanakana ny fahatsapana hanoanana. Fa ny fitomboan'ny faniriana mafy dia mety tsy hitranga raha fantatrao ny fisotroana carnitine.
Ahoana no tokony handraisana carnitine amin'ny vehivavy?
Ny halavan'ny karazana carnitine dia miovaova ary miankina amin'ny tanjon'ilay atleta ho an'ny tenany. Saingy somary tsotra kokoa ny matihanina, ho azy ireo ny hetsi-poko rehetra no heverin'ny mpanazatra. Ireo izay te hanary vehivavy bevohoka dia mila mandinika ny sahanin'ny carnitine, ary mahatsiaro ny sakafo ara-pahasalamana, satria raha mbola misakafo hatrany ianao, dia tsy ho voasoroka ny fanafihan'ny hanoanana.
Andao hanomboka, angamba, miaraka amin'ny sakafo - ireo no fitsipika tsy maintsy tsaroana rehefa manomana izany:
Ny sakafo dia tokony ho 5, fa tsy mihoatra ny 300 grama tsirairay.
Ny isa farafahakeliny dia 1 gram isaky ny 1 kg ny lanjany.
Ny tsiranoka tsotra ao anatin'io sakafo io dia tokony ho farafahakeliny, ny toaka sy ny zava-pisotro misy alika "tsy".
Tokony ho voafetra ho 60 grama isan'andro ny fampiasana ny menaka, ary tsara kokoa raha matavy be (voanjo, avocados, menaka oliva).
Ny vokatra kokoa, ny tsara kokoa.
Mitandrema amin'ny kalôria - tsy afaka mihoatra noho izany ianao, fa tsy tokony handevona kaloria fohy kokoa noho ny mahazatra.
Ny fiasan'ny carnitine dia ny vokany, ankoatra ny enta-mavesatry ny aerôbika, ahitàna ny heriny, fa tokony hiaritra izy ireo - lanja ambany sy famerenana marobe. Ny tetikasan'ny carnitine dia toy izao manaraka izao:
Mandritra 20 minitra alohan'ny sakafo maraina, 200 mg.
20 minitra alohan'ny sakafo, 200 mg.
Amin'ny 20 minitra alohan'ny sakafo, 200 mg.
20 minitra alohan'ny fanofanana, 600 mg.
Tokony hitadidy koa ianao fa raha mandray carnitine ianao dia mila misotro kafe mazàna, raha tsy izany dia afaka mahazo aretina ianao - misy vokany mahavariana ny carnitine.
Fanaovana fitsaboana miaraka amin'ny osteochondrosis
Nahoana no ilaina ny proteinina?
Ahoana raha matavy aho?
Motivation ho an'ny fahaverezan'ny lanja
Ahoana no hitandrovana ny fomba fiaina tsara?
Qigong ho an'ny vehivavy
Mamolavola ao an-trano - kilasy fianianana mavesatra
Alefaso amin'ny atody
Ahoana ny fomba ampianarana ny ankizy iray?
Blouses ny 2018 - lamaody firy, lohahevitra, fironana, ary inona no tokony harahina?
Fitaovana ho an'ny fanolanana
Ahoana no hanombohana ny akquarium voalohany?
Fotsy hoditra Lacoste
Ahoana no maha-maharitra ny fitondrana vohoka mandritra ny herinandro maromaro?
Nahoana ianao no tsy afaka manao batisa ilay zazavavy voalohany?
Hihinana menaka varimbazaha - fanatsarana
Ahoana ny fametrahana viburnum amin'ny ririnina?
Tom Hiddleton, Elizabeth Hurley, Prints William sy ny vahiny nasaina tao amin'ny Lalaon'ny Standard Theater Awards-2016
Raha mpanao politika malaza dia hipsters ...
Sary mihetsika ho an'ny andro tsirairay
Ny mpilalao sarimihetsika Lily James dia nanakorontana ny Town & Country